Toerana sy fitsidihana lehibe any Victoria, Aostralia | Vaovao momba ny dia
Toerana sy fitsidihana lehibe any Victoria, Aostralia
Susana Garcia | | Aostralia, Oseania, Inona no ho hita
Victoria no fanjakana faharoa kelin'i Australia aorian'ny Tasmania, ary eo amin'ny morontsiraka atsimoatsinanana no misy azy. Na dia kely aza io fanjakana io dia betsaka ny azo atolotra ny mpitsidika azy, indrindra amin'ny lafiny morontsiraka sy ny natiora. Saingy any Victoria dia misy bebe kokoa, ary ao amin'ity faritra ity no ahitantsika ny tanàna melbourne, miaraka amin'ireo fialamboly an-tanàn-dehibe.
Araka ny efa nolazainay, dia misy zavatra mahaliana maromaro ao amin'ny Faritra Victoria, na dia tsy maintsy manondro zavatra ilaina roa tsy tokony hotadidintsika aza isika. Ny iray dia ny tanànan'i Melbourne, ary ny iray kosa dia fantatra amin'ny anarana hoe ireo Apôstôly 12, fananganana vatolampy amoron-tsiraka izay nitety an'izao tontolo izao, ary izany dia mampahatsiahy antsika ny morontsirak'ireo katedraly ao Lugo.
1 Tanànan'ny Melbourne
2 Làlan-dranomasina lehibe sy ireo apôstôly 12
3 Bibidia eto amin'ny nosy Phillip
4 Fialan-tsasatra miala sasatra ao amin'ny Saikinosin'i Mornington
5 Jereo ny tanimboaloboka ao amin'ny Valley Yarra
Io no tanàna manan-danja indrindra amin'ny faritra Victoria. Satria hanana toerana voajanahary maro hankafizana isika, tsara foana ny mijanona amin'ny tanàna lehibe toa an'i Melbourne. Ao aminy afaka mahita fialamboly betsaka isika. Mandehandeha mamaky ny faritra bohemia ao St. Kilda ary mankafiza amin'ny tram-by, mividiana vokatra vaovao sy eo an-toerana amin'ny tsena malalaka eny an-toerana, tsidiho ny tranom-bakoka Melbourne na ny efitrano fampirantiana, jereo ny lalao cricket na lalao baolina kitra an'ny ligin'i Aostraliana. amin'ireo zavatra azontsika atao eto amin'ity tanàna ity. Ary ny tsara indrindra dia raha mandreraka antsika ny asfalta na manaloka antsika, afaka mahita tanimboaloboka midadasika sy morontsiraka voajanahary ary toerana voajanahary isika amin'ny halavirana. Io no manintona lehibe an'i Aostralia sy ny tanànany.
Làlan-dranomasina lehibe sy ireo apôstôly 12
Mandeha mivantana any amin'ny lalana mankany amin'ny làlan'ny Ranomasina Lehibe isika ireo Apôstôly 12 tsy mampino, famolavolana vatolampy izay tokony ho 20 tapitrisa taona lasa izay no niraikitra tamin'ny hantsam-bato, saingy noho ny fikaohin'ny rano sy ny rivotra dia simba mandra-pitoka-monina. Betsaka ny zavatra tsy maintsy atao amin'ity faritra ity, toy ny mankafy mitsangatsangana amoron-dranomasina, mandeha amin'ny fidinana amin'ny Gibson Stair nidina ny hantsana, na mianatra ny tantaran'ny sambo sambo. Misy mihitsy aza ny toerana anoloran'izy ireo fitsangatsangana angidimby hahitanao ireo fiorenan-bato tsy mampino izay mivoaka anaty ranomasina akaiky. Iray amin'ireo toerana tsara indrindra hankafizanao ny natiora. Ankoatr'izay dia tsy maintsy raisina fa ny vatolampy dia mihena eo amin'ny roa santimetatra eo ho eo isan-taona, ka ho avy ny fotoana tsy hisy, noho izany dia mendrika ny mahita azy ireo amin'ny hakantony rehetra.
Bibidia eto amin'ny nosy Phillip
90 minitra fotsiny avy eo Melbourne dia afaka miroboka ao amin'ny Bibidia Phillip Island. Ny iray amin'ireo zava-nisongadina dia ny Penguin Parade, izay miseho isan'andro. Ireo mpizahatany dia afaka manatona ny moron-dranomasina tarihan'ny mpiambina valan-javaboary hijerena ireo penguin mitsangatsangana mankany amin'ny morontsiraka marobe aorian'ny andro fanjonoan'ny ranomasina. Saingy tsy ity fampisehoana ity ihany no mahasarika mpizahatany an-jatony, fa eto amin'ity nosy ity dia azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Koala Conservation Center na ny toeram-piompiana izay lova ara-kolontsaina, antsoina hoe Churchill Island Heritage Farm, akaikin'ny Seal Rocks, izay ahitanao zanatany liona an-dranomasina. Ny morontsirak'izy io koa dia malaza be noho ny toetrandro fitetezam-parasy lehibe, toy ilay antsoina hoe Woolamai Beach.
Fialan-tsasatra miala sasatra ao amin'ny Saikinosin'i Mornington
Ity dia toerana akaikin'ny tanànan'i Melbourne, noho izany dia azo jerena amin'ny fitsangatsanganana an-tanàna manomboka amin'ny tanàna. Any Mornington dia afaka mahafantatra isika hoe inona izany fiainana milamina eto amin'ity faritra Austral itymankany Trano manan-tantara lehibe, tsena eo an-toerana miaraka amin'ny vokatra biolojika sy kalitao, zaridaina, natiora ary tanimboaloboka maro. Eto ny karazana divay dia ny an'ny pinot noir sy chardonnay. Fahasarotana iray hafa izay mampanakaiky ny olona kokoa amin'ity faritra ity ny spa sy ny habaka anaovany hafanana, ka vita ny tolotra fialan-tsasatra. Ary farany, azo atao ny mankafy ny kianja filalaovana golf sy kafe any Portsea.
Jereo ny tanimboaloboka ao amin'ny Valley Yarra
Raha fantatra amin'ny zavatra iray ny Lohasahan'i Yarra, dia ho an'ny fananana izany tanimboaloboka goavambe izay mamokatra divay mamirapiratra sy pinot noir, ankoatry ny karazany tsy dia malaza loatra. Faritra iray izay ny zavatra tena mahaliana dia tsy isalasalana fa hankafy ny fitsidihana ireo famiazam-boaloboka sy ireo tanimboaloboka mahafinaritra, izay manome fizahana tsy manam-paharoa. Misy mihoatra ny 80 ny famiazam-boaloboka ao, fa izy io koa dia toerana ahafahanao manandrana vokatra vaovao eo an-toerana, miaraka amin'ny voankazo sy legioma avy amin'ny voajanahary na salmon ary trout. Ary ao amin'ilay faritra dia misy ihany koa ny labiera fanaovana asa-tanana, ka mahatonga azy io ho toerana mety indrindra ho an'ireo tia gastrisitika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Aostralia » Toerana sy fitsidihana lehibe any Victoria, Aostralia
Trano fandraisam-bahiny telo any amin'ny Nosy Seychelles
Ny fomba fahitana 5 tsara indrindra any Paris